El Al Israel Airlines dia mandefa sidina mivantana mankany Casablanca sy Marrakesh
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » El Al Israel Airlines dia mandefa sidina mivantana mankany Casablanca sy Marrakesh
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fanoloran'i El Al ny zotra mivantana mankany Maroc dia manaraka ny fifanarahana normalisation nosoniavina teo amin'ny firenena roa tonta tamin'ny Desambra 2020.
El Al dia manidina any Maraoka anio.
Israir dia hanomboka sidina mivantana eo anelanelan'ny Tel Aviv sy Marrakesh amin'ny 25 Jolay.
Arkia dia hanomboka serivisy avy any Tel Aviv ka hatrany Marrakesh amin'ny 3 Aogositra
Nambaran'ny mpitatitra fiaramanidina israeliana El Al Israel Airlines androany fa hanangana zotra sidina mivantana roa mankany Maraoka, ny voalohany amin'ireo firenena roa ireo.
Hanomboka ny 25 Jolay ny serivisy Israeliana-Marokisin'i El Al.
Seranam-piaramanidina El Al Israel hanao sidina eo anelanelan'ny Israel Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Ben Gurion ary ny tanànan'ny maraokana ao Casablanca sy Marrakesh.
Nilaza ny zotram-pitaterana an'habakabaka fa maharitra dimy ora ny sidina mankany Maraoka.
"Morocco dia manolotra fitambarana fandresena amin'ny ala mahafinaritra any an-efitra, tanàna manan-tantara, maritrano manaitra, tsena maro loko, sakafo matsiro ary fitiavana mandray vahiny," hoy i El Al.
Ny 25 jolay ihany koa, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka faharoa lehibe indrindra ao Israel Israir dia hanomboka sidina mivantana eo anelanelan'ny Tel Aviv sy Marrakesh. Ny zotram-piaramanidina Israeliana lehibe indrindra Arkia dia hanomboka io zotra io amin'ny 3 Aogositra.